Uncategorized | ShweBiz.com
All WA household fees and charges have been frozen, effective immediately
Posted by shwebiz Uncategorized
Western Australia အစိုးရ၏ Coronavirus အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် အထူးအစီအစဉ်။ အနောက်ဩစတေးလျ WA တွင်နေထိုင်သူများအားလုံး ရေဖိုး၊ မီးဖိုး၊ အများသုံး ဘတ်စ်၊ ရထားခများ၊ ကားအခွန်များ၊ Emergency Service Levy များ ယနေ့မှစ၍ ဇူလိုင်လအထိ စျေးမတက်တော့ ဟု WA ဝန်ကြီးချုပ် Mark McGowan မှအထူးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။ Energy Assistance Payment ကို $600 အထိတိုးမြှင့်ပေးမည်။ Mark McGowan announces stimulus package for WA economy #BREAKING: All WA household fees and charges have been frozen, effective immediately. #LIVE: […]
Australia Minimum Wages increase 3.5 percent
သြစီရဲ့ အနိမ့်ဆုံး လစာနှုန်း ၃.၅% တိုးလာ သြစတြေးလျနိုင်ငံက Fair Work Commission ကနေ အနိမ့်ဆုံး လစာနှုန်း ၃.၅% တိုးမြင့်ပေးဖို့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက် တပတ်စာ အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားခက ၇၁၉ ဒေါ်လာ ရရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး အနိမ့်ဆုံး လစာက တစ်နာရီကို ၁၈.၉ ၃ ဒေါ်လာ ရှိတာကြောင့် တစ်ပတ်စာလစာက အရင်ကထက် ၂၄.၃၀ ဒေါ်လာ ပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်စာ လစာက ၇၁၉ .၂၀ ဒေါ်လာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမား သမဂ္ဂက တစ်ပတ်စာ ဒေါ်လာ ၅၀ တိုးမြင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပေမယ့် ၂၄.၃၀ ဒေါ်လာသာ တိုးပေးတာ […]
UberEats delivery rider loses sight in eye after sickening gang attack in Perth suburbs
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် UberEats delivery လုပ်ကိုင်သူ Ivan Jonatahir ဆိုသူသည် ၁၉ ဇန်နဝါရီ၊ စနေနေ့ည ၉ နာရီခန့်က Booragoon ရပ်ကွက် Davy Street တွင် ဆိုးသွမ်းလူငယ်တစ်စုမှ ရိုက်နှက်ခံရသဖြင့် မျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံထိခိုက်သွားသည်ဟုသိရသည်။ ဇနီးဖြစ်သူ Natalia က “သူကပုံမှန် လုပ်နေကျအတိုင်း UberEats အထုတ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က လက်နှိပ်ဓါတ်မီးနဲ့မျက်လုံးကိုထိုးတော့ မျက်လုံးတွေပြာသွားပါတယ်။ ချက်ခြင်းထွက်ပြေးပေမယ့်လဲ၊ နောက်တစ်ယောက်က တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ကို ဝေးသည့်ထက်ဝေးရာ မောင်းပြေးရင်းပြေးရင်းနဲ့…. နောက်ဆုံး သူ့မျက်လုံးဘာမှမမြင်ရတော့တာကို သိသွားတဲ့အထိပါပဲ။” ဟုဆိုသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လိုက်လံစုံစမ်းလျှက်ရှိသော်လည်း တရားခံကိုဖမ်းမမိသေးဟုသိရသည်။ ရဲတွေက အနီးနားက CCTV အချို့ကိုရထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရတော့ ဘယ်သူလုပ်သလဲဆိုတာတပ်အပ်မပြောနိုင်သေးပါဘူး ဟုဆိုသည်။ […]
WA’s best restaurants 2019 by AGFG
AGFG ခေါ် Australia’s Good Food Guide မှ ပေးအပ်သည့် Chef Hat Award ရရှိသည့် WA မှ အကောင်းဆုံး စားသောက်ဆိုင်များ။ COMO The Treasury ဟော်တယ်၏ Rooftop မှ Wildflower ဆိုင်ကတော့ စုစုပေါင်း အမှတ် ၂၀ ကို ၁၆ မှတ် WA တွင်အမှတ်အများဆုံးဖြင့် 2019 Chef Hat Awards ရရှိပါသည်။ Asian ဆိုင်အနေဖြင့် ယိုးဒယားစားသောက်ဆိုင် Long Chim, Perth CBD နှင့် Japan ဆိုင် Nobu, Burswood တို့က ၁၃ မှတ်စီဖြင့် အကောင်းဆုံးဆိုင်များစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည်။ AGFG Chef […]
Five important immigration changes in 2019
နှစ်သစ်မှာ ဥပဒေသစ်တွေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသစ်တွေ ထွက်ပေါ်လေ့ရှိပြီး အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေတဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ စနစ်ကလည်း ပါဝင်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဗီဇာစနစ်နဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး စနစ်အပြောင်းအလဲ ၅ ခုကို အတိုချုပ် တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 1. ကြင်ယာဖက်ဗီဇာ partner visa စိစစ်မှုတွေမှာ အချိန်ပိုစောင့်ရမယ် Partner visas take longer to process. အရင်တုန်းကတော့ ကြင်ယာဖက်ကို ခေါ်ချင်ရင် ဖောင်တင်ပြီး ခေါ်ရုံသာဖြစ်ပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ အဆင့် ၂ ဆင့် ဖြတ်သန်းပြီးမှ လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ ကြင်ယာဖက် ဗီဇာရဖို့ လျှောက်ထားသူ တချို့ဟာ သူတို့ ကြင်ယာဖက်ရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုတွေ […]
Rio Tinto Pilbara Mine to create 600 permanent jobs
အသစ်ဖြစ်သည့် Pilbara ဖက်ရှိ Koodaideri iron ore mine တွင် ၃.၅ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီး Permanent အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။ 2019 တွင် တည်ဆောက်ရေးများစတင်မည်၊ ၂၀၂၀ တွင် ထုတ်လုပ်ရေးများစတင်မည်။ Contruction ကာလအတွင်း လူ ၂၀၀၀ ခန့်အလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်၊ Operational ကာလတွင် လူခြောက်ရာကျော်အလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Perth is listed in The world’s most exciting destinations 2019
Perth ၿမိဳ႕သည္ National Geographic ၏ The world’s most exciting destinations 2019 တြင္ ပါဝင္လွ်က္ရွိပါသည္။ “Visit the world’s most remote major city” ဟု National Geographic က ဆိုသည္။ Red rock formations မ်ားႏွင့္ အလြန္လွပေသာ Coastal Cliffs မ်ားျဖင့္ နာမည္ႀကီးသည္ဟုေရးသားထားသည္။ “Surf-and-sun spotabit ofabest-kept secret” ဟုတင္စားသည္။ Remote City ဆိုေသာ္လည္း London မွ ေလယာဥ္တိုက္႐ိုက္စီးၿပီး Perth ၿမိဳ႕ရွိ ကမ႓ာ့အေကာင္းဆံုး Beach မ်ား၊ Swan Velly […]
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အလုပ်သမားတွေအတွက် အစိုးရက ဗီဇာ ဖြေလျော့ပေးဖို့ရှိ
စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အလုပ်သမား မလုံမလောက်ဖြစ်နေတာကို ရာသက်ပန် အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံခြားကနေလာတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ဗီဇာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ဖြေလျော့ပေးသွားမယ်လို့ အစိုးရက ပြောပါတယ်။ အခုလို ပြောင်းလဲမှုကို National Farmers’ Federation အဖွဲ့က ကြိုဆိုပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေအပေါ် အမြတ်ထုတ်ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေ ဆက်ပြီး ဖြစ်နေမှာကို စိုးရိမ်တယ်လို့ Australian Workers’ Union သြစတြေးလျ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့က ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ လယ်ယာအလုပ်ရှင်တွေရဲ့ အလုပ်သမား ဝန်ထမ်း မလုံမလောက် ဖြစ်နေတာတွေကို ကူညီဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့ ရာသီအလိုက် အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ – working-holiday visa ဆိုတဲ့ အားလပ်ရက် အလုပ်လုပ်ခွင့် ဗီဇာ တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြောင်းအလဲလုပ် ပေးနိုင်မယ့် အစီအစဉ် မူကြမ်းတရပ်ကို […]